I-Copelands Surf Haven - SurfSide #707 - I-Airbnb
I-Copelands Surf Haven - SurfSide #707
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Lori
Jabulela ukubuka kweGulf kanye nephuli kusukela kule ndlu yesitezi sesi-7 e-The Surfside Resort. Ngemva kosuku elangeni, phumula kuvulandi ngengilazi yewayini futhi ubuke ukushona kwelanga. Finyelela ku-balcony kusuka kuwo womabili amakamelo okulala noma egumbini lokuhlala.
I-master bedroom suite inombhede weKing kanye nosofa wamawele amabili, kanye nalokho kubuka OKUHLE! Igumbi lokulala lezivakashi linemibhede emibili enosayizi ogcwele kanye nebhavu langasese. Igumbi lokuhlala elibanzi linethezekile futhi livulekele Igumbi lokudlela ~ lilungele isikhathi somndeni. Kunezihlalo zabantu abayisishiyagalolunye, phakathi kwetafula lokudlela kanye ne-breakfast bar.
Isici esiyingqayizivele sale nkimbinkimbi i-Sky Bridge exhuma ogwini olunesihlabathi esimhlophe. Kukhona indawo yokuphumula emangalisayo enedamu lokubhukuda elishisayo, izindawo ze-Jacuzzi ezi-2, i-kiddie pool, indawo yokubhukuda enwetshiwe, ama-saunas nendlu yokugeza. Chitha intambama enkundleni yethenisi noma enkundleni yebhola lomnqakiswano, jabulela umdlalo we-volleyball noma dlala i-shuffleboard yakudala. Izinto zokusebenza zingabhekwa edeskini elingaphambili lesayithi. I-tiki-bar eseceleni kwechibi kanye nesevisi yokudla eseceleni kolwandle iyisici esidumile kuzo zonke izivakashi. Jabulela isidlo sakusihlwa nomndeni endaweni yokudlela yaseRoyal Palm Grille.
4.70 · 102 okushiwo abanye